Tababare Valverde oo ku tilmaamay De Jong inuu yahay xiddiga mustaqbalka, muxuuse ka yiri Griezmann? – Gool FM
(Spain) 17 Luulyo 2019. Macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa amaanay heshiisyada cusub ay Blaugrana ka sameysay suuqan xagaaga.
Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhameystirka 3 heshiis kuwaasoo kala ah Antoine Griezmann, Frenkie de Jong iyo goolhaayaha reer Brazil ee Neto.
Hadaba Ernesto Valverde ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Barcelona ayaa wuxuu ku sheegay:
“Waxaan helnay saddex heshiisyo ee muhiim ah, kuwaasoo ka ciyaara saddex xarumood ee kala duwan, waxaana ka rajeeneynaa wax badan, waxaanan ka warqabnaa xiisahooda, waxaana ka dooneynaa inay diirada saaraan firfircoonida kooxda”.
“Frenkie de Jong wuxuu u ciyaaray si heer sarre ah sanadihii ugu dambeeyay, wuxuuna heystaa xili ciyaareed cajiib ah uu lasoo qaatay kooxdiisii hore, waxaan rajeeneynaa inuu wax ku soo kordhiyo khadka dhexe, waa ciyaaryahanka mustaqbalka, wuxuu leeyahay xirfadaha iyo qaabka aan dooneyno”.
“Antoine Griezmann waa ciyaaryahan qibrad u leh horyaalka La Liga, wuxuu ku raaxeysanayaa xawaaraha iyo inuu ka faa’ideysto boosaska, wuxuuna si wanaagsan u go’aamiyaa taabashada ugu dambeysa ee garoonka, waxaana ka war qabnaa waxa ay bixin karaan ciyaartoyda isaga la midka ah, waxaana rajo weyn ka qabnaa isaga”.
“Neto sidoo kale waa ciyaaryahan qibrad leh, waxaana lagu aamini karaa ilaalinta dhanka goolka, wuxuu dhameystir buuxa u yahay Ter Stegen”.